वाङ यी नेपाल आएको १२ घण्टा नबित्दै माओवादीका हाइकमाण्ड नेताहरु चीन हिडे, के हो रहस्य ? — Sanchar Kendra
वाङ यी नेपाल आएको १२ घण्टा नबित्दै माओवादीका हाइकमाण्ड नेताहरु चीन हिडे, के हो रहस्य ?
काठमाडौँ । तीन दिने भ्रमणका लागि चीनको राज्यपरिषद् सदस्य एवं विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौँ ओर्लिएको १ रात मात्रै बितेको छ ।
विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आएको १२ घण्टा नबित्दै नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरूङसहितका नेताहरु चीन गएका छन्। राजनीतिक भेटघाटका लागि उनीहरु चीनको राजधानी बेइजिङ गएका हुन्।
नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गएका नेता वर्षमान पुनसँगै गुरूङ पनि चीन गएका हुन्। पुनले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै राजनीतिक भेटघाटसमेत गर्ने बताइएको छ।
चीनमा रहँदा गुरूङ र पुन दुवैले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेट गर्ने स्रोतले बतायो। पुन र गुरूङसँगै पुनकी पत्नी ओनसरी घर्ती, उपचारमा संलग्न डा. रोशन पोखरेल पनि हिमालयन एयरलाइन्सको कार्गो विमानबाट चीन गएका हुन्।
सामान ढुवानी गर्न जाँदै गरेको कार्गो विमानमार्फत उनीहरू शुक्रबार बिहान नौ बजे चीन प्रस्थान गरेका हुन्। बंशाणुगत जण्डिसका कारण पीडित पुनले यसअघि चीनको सेनजेनस्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गराएका थिए।
जण्डिसको मात्रा (बिलुरूबिन) अनियन्त्रित रुपमा बढेर ३४ पुगेसँगै स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि पुनलाई गत १३ असोजमा थाइल्याण्डको बैंककस्थित समितिभेज अस्पताल लगिएको थियो।
दुई महिनाको उपचारपछि पनि स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार नभएपछि पुनलाई १० मंसिरमा चीनबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली आएर सेनजेन लगेको थियो।
स्वास्थ्य लाभ गरी पुन १० माघमा स्वदेश फर्किएका थिए। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहे पनि चीनबाट फर्किनुअघि चिकित्सकले दुई महिनापछि फलोअपमा आउन भनेकाले जान लागेको पुन पत्नी घर्तीले जानकारी दिइन्।
स्वास्थ्य मानिसमा बिलुरूबिनको मात्रा १.५ देखि ८ बिन्दुसम्म हुने भए पनि पुनको शरीरमा उक्त मात्रा अत्यधिक छ। पुन स्वास्थ्य जाँच र राजनीतिक भेट गरी चार दिनपछि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।
आज के-के गर्दैछन् चिनियाँ विदेशमन्त्री ?
नेपालको त्रिदिवसीय भ्रमणमा नेपाल आइपुगेका चीनको राज्यपरिषद् सदस्य एवं विदेश मन्त्री वाङ यी शनिबार औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त रहने कार्यसूची रहेको छ । शुक्रबार नेपाल आएर वाङ यी विमानस्थलबाट सोझै बत्तिसपुतलीस्थित होटल द्वारिका पुगेका थिए । शुक्रबार उनी कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार शनिबार बिहान पनि विदेशमन्त्री वाङ यी घुमफिरमा नै व्यस्त रहनेछन् । तीन बजेदेखि मात्र उनको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ । साढे ३ बजेदेखि पौने ४ बजेसम्म परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र विदेशमन्त्री वाङबीच विशेष भेटवार्ता हुनेछ । विदेशमन्त्री वाङसहित २० सदस्यीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग परराष्ट्रमन्त्री खड्कासहितको १६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको छुट्टै बैठक बस्नेछ । सोही क्रममा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र, अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी हुनेछन्।
विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको प्रमण्डलमा नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छी, चीनको विदेश मन्त्रालयका सहसचिव वु जिङवाओ, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शेङ कुपिङ, विदेश मन्त्रालयको एशियाली मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जेनसङ, नायब शिष्टाचार महानिर्देशक सोङ जिया र विदेशमन्त्री याङका सचिव देङ झेइ रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेशमन्त्री वाङ यीले शनिबार साँझ नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जसअनुसार उनी पौने ६ बजेदेखि सवा ६ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेटमा व्यस्त रहनेछन् ।